Obbo Margaa Dabaloo ogeessa tajaajiila eegumsa fayyaati. Narsummaa ( clinical nurse) digrii jalqabaa barnoota waa’ee qorichaa ykn Dawaan (pharmacy)digrii lammataa qabu. Faarmaasii ofii bananii hojjataa ituu jiranii yeroo lama hidhaman. Inni Jalqabaa baatii sadiif ture. Yeroo lammaffaa qabamuuf jedhan dararaa duraan irra ga’e jiluun naannoo gadhiisanii badan.